Soomaaliya oo martigelin doonta bisha September shir madaxeedka IGAD - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo martigelin doonta bisha September shir madaxeedka IGAD
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa martigelinaysa shir madaxeedka urur goboleedka IGAD kaasoo la qorsheeyay inuu dhaco bartamaha bisha September ee sanadkan, sida uu sheegay Madaxweynaha.
Soomaaliya ayaa la siiyay in ay martigeliso shirka IGAD kadib markii madaxda wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ay kulan ku yeesheen magaalada Addis Ababa shalay oo Jimce ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo maanta oo Sabti ah kusoo noqday Muqdisho, ayaa sheegay in shirka soo socda ee madaxda dowladaha ku bahoobay IGAD lagu qaban doono caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Bartamihii bishii Janaayo sanadkii lasoo dhaafay ee 2015-ka, todobo wasiir dibadeed oo ka socda wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku dhawaad 25-sanno kadib.
August 5, 2016 Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo u safray Addis Ababa si uu uga qaybgalo shirka urur goboleedka IGAD